China Hydraulika Guillotine shearing machine ary manamboatra | YingYee
Milina fanetezana Guillotine Hydraulika
Aorian'ny fanompoana:Injeniera vonona hanompo milina any ivelany
Zintin'aratra:380V / 3Phase / 50Hz Na amin'ny fangatahanao
Mode fanapahana:Fanapahana Hydraulika na fanapahana herinaratra
Hafainganana mamorona:8-10m / min
hydraulic Milina manety
Ny baiko kely dia azo ekena, manana tsena tsara manerantany. * Izy io dia noraisina fiara mitondra fiara, ny rafitra vy misy vy izay manana tanjaka sy henjana ampy. * Ny milina dia ampitaina amin'ny famerenana herinaratra any whicn, fanitsiana manara-penitra, rafitra ho an'ny famafana ny lelany, fitaovana hazavana ashadw manaparitaka operatikon, mpampitohy, sakana azo antoka sy azo antoka. * Azo ampitaina amin'ny mpanera mpanohana koa izy io. * Ny rafitra vy vita amin'ny vy manontolo miaraka amin'ny tanjaka sy fihenjanana. * Fitaterana ambony hidraulika. * Fitaovana fanodinana hydraulic miaraka amin'ny bara azo antoka azo antoka. * Raikitra ny fanitsiana tapaka lalan-dra, azo ahitsy ny fanapahana mba hiantohana ny priductionmitombo ny fahombiazana rehefa manapaka ravina fohy.
* Ny tobin'ny back-gauge dia mandray ny fepetra entin'ny motera miaraka amin'ny fanitsiana amin'ny tanana. * Fitaovana mpanapaka. * Fitaovana tsipika fahazavana ka mora ny manisy tsipika ho an'ny fanapahana
1. Hateviny: 3mm ‐ 20mm
2. Max halavany: 12‐15M
3. Max sakany fanapahana: 900-1200mm 4. Haingam-pandeha ho an'ny fanapahana: 8‐10m / min 5. Hery lehibe: 30Kw (20mm) 20Kw (18mm) 15Kw (12mm) 6. Moto mihetsika: 5.5Kw 7. Zoro fanapahana: 0,5‐3 ° 8. Haavo ny lampihazo: 1030mm 9. Halavan'ny atrikasa: 100 ㎡ 10. maotera Servo hifehezana ny halavan'ny fitaovana, fanaraha-maso 3 pcs PLC mifandrindra Marika singa elektrika:
1. efijery mikasika: Delta
3. fampitàna: schneider 4. Chint mpandika faritra 5. Encoder: omron 6. schneider ambany 7. Mpamorona Shihlin
1. Fotoana fohy fandefasana.
Mitady filamatra Milina fanetezana hydraulicMpanamboatra sy mpamatsy? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay mba hanampiana anao hamorona. RehetraMasinina manety ny volo Guillotineazo antoka kalitao. Izahay dia China Factory Factory an'ny milina fanapahana mora ampiasaina. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy vokatra: milina manety
Masinina manety ny volo Guillotine
Milina fanetezana lovia
Milina famolavolana kapila vita anaty tafo vita am-pitrandrahana amidy
c purlin tafo famolavolana horonan-taratasy famoronana milina
lalambe mpiambina arabe manondro horonan-taratasy mamorona m ...
Z28-250 Masinina mihodina
CE fanamarinana roa sosona mangatsiaka horonan-taratasy mamorona ...
Roofin-taila vita amin'ny vy vita amin'ny metaly